German Automation Talent Powers Musk’s Battery Move to Europe | Myanmar Business Today
Home Business International German Automation Talent Powers Musk’s Battery Move to Europe
Edward Taylor (REUTERS)
To unclog bottlenecks last year at his Tesla Inc (TSLA.O) plant in California, Elon Musk flew in six planeloads of new robots and equipment from Germany to speed up battery production for its Model 3.
BMW (BMWG.DE) hasafactory in Leipzig, where it builds its i3 electric vehicle and it will source battery cells fromafactory in Erfurt run by China’s Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) (300750.SZ).
ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Tesla Inc စက်ရုံတွင် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အခက်ကြုံခဲ့ရခြင်းကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် Elon Musk သည် Model3ကားများအတွက် ဘက်ထရီထုတ်လုပ်ရေးကို အရှိန်မြှင့်ရန် လေယာဥ်ခြောက်စင်းစာ ဂျာမနီနိုင်ငံထုတ် စက်ရုံများနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများကို သယ်ယူခဲ့သည်။
လျှပ်စစ်ကားထုတ်လုပ်သည့် Tesla အနေဖြင့် ဂျာမနီနိုင်ငံ ဘာလင်မြို့အနီးတွင် ဥရောပ ကားနှင့် ဘက်ထရီ စက်ရုံကို တည်ဆောက်မည်ဟု ကြေညာလိုက်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ အလိုအလျောက် စက်ပစ္စည်း ecosystem ကို တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ အသုံးချရန် ကြိုးစားနေခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိအချိန်အထိတော့ Musk အနေဖြင့် ပြိုင်ဘက်များထက် မော်တော်ကား ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်စေမည့် အလိုအလျောက် စက်များတပ်ဆင်ထားသော စက်ရုံတည်ဆောက်ရေးဟူသော အစီအစဥ်ကို အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ အဆိုပါ စက်ရုံမှာ ယင်းအနေအထားများကို ပြောင်းလဲရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။
BMW ဆိုလျှင် ယင်း၏ i3 လျှပ်စစ်ကားများကို ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံကို Leipzing တွင် တည်ဆောက်ထားပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ Contemporary Amperex Technology Ltd က တည်ဆောက် လည်ပတ်နေသည့် Erfurt ရှိ စက်ရုံမှ ဘက်ထရီဆဲလ်များကို သုံးဆွဲမည်ဖြစ်သည်။
VW ဆိုလျှင်လည်း လျှပ်စစ်မော်တော်ကား ၃၃၀၀၀၀ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် Zwickau ရှိ စက်ရုံကို ပြန်လည် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ တည်ဆင်ထုတ်လုပ်နေသည်။ ဂျာမန်အင်ဂျင်နီယား လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် Siemens AGသည်လည်း အဆင့်မင့် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် မော်တော်ကား အားသွင်းခြင်းနယ်ပယ်ရှိ စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန်အတွက် Musk နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဂျာမနီမော်တော်ယာဥ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှာ ယူရို ၁ ဘီလီယံရှိသည့် ဂျာမနီအစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာရေးရန်ပုံငွေအသုံးချရန် ကြိုးစားနေကြသည်။
SOURCEEdward Taylor (REUTERS)
Previous article‘Suffering’ German Economy Dodges Recession in Third Quarter
Next articleAlibaba Goes Paperless for $13.4 Billion Listing In A First For Hong Kong: Source